Global Voices teny Malagasy » Nanjary Niova Ho Mahery Vaika Sy Masiaka Ny Fomba Sinoa Enti-manao Sivana : ‘Ny Great Cannon’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Mey 2015 3:06 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Sivana
Sary araka ny lojika notsotsorina, mampiseho ny Great Cannon sy Great Firewall. Sary nalaina avy amin'ny Citizen Lab.
Citizen Lab, izay foibem-pikarohana tena raitra momba ny zon’olombelona, misahana ny mikasika ny sehatry ny Teknolojian’ny Filazam-baovao sy ny Serasera ao amin’ny Oniversiten’i Toronto, dia nahamarika fa ny foto-drafitrasan’ireo fanafihana DDoS “rangahy-eo-afovoany” atao amin’ny sehatra “hub” Shinoa malalaka, GitHub, dia miray toerana amin’ny Great Firewall. Citizen Lab dia niantso io zava-baovao ara-teknolojika io hoe ”Great Cannon” .
Midika izany fahatsapana izany fa nanjary niova endrika mahery vaika sy masiaka ny fomba Shinoa fanaovana sivana.Tsy hoe nanakana ny votoaty avy any ampitan-dranomasina hiditra akory ny Great Cannon, izay afaka manao izany, fa aleony “mikirakira sy manao fitaovana ny fifamoivoizan’ireo rafitra ‘sendra-mba-teo’ ivelan’i Shina, ary manomana mangingina ireo fitety ao aminy hanao fanafihana DDoS goavana”. Nanamafy ny Citizen Lab fa mitovy tsy misy valaka amin’ny rafitra QUANTUM an'ny NSA  ny Great Cannon, izay mahavita “mikendry ireo solosaina any ivelany rehetra ka mifandray amin’ireo Tranonkala miorina any Shina ary tsy mampiasa tanteraka ny HTTPS”.
Naninona no nitranga ny fanafihana ny GitHub ?
Lasibatry ny sivann'ny manampahefana Shinoa ny GitHub nanomboka tamin’ny taona 2013. Noho ny maha sehatra fampiantranoana misokatra azy, dia nampiantrano fitaovana sy votoaty mpanohitra an-tserasera, izay tadiavin’ny manampahefana Shinoa ho sakanana ny GitHub. Raha ny marina anefa dia nikatso tanteraka nandritry ny fotoana fohy ilay sehatra ny volana janoary 2013  noho ny fanamboarana ny “HTTPS”-ny azy ihany, izay mahatonga ny Great Firewall tsy ho afa-nanakana ireo pejy manokan’ny tsirairay, toa ny an’ny tetikasa Mongol, fitaovana loharano misokatra nampiantranoin’i GitHub izay mitsakaraka ny toerana misy ny Great Firewall. Tsy naharitra ela ny fikatsoana tamin’ny taona 2013 satria nisy fiantraikany teo amin’ireo fotodrafitrasan’ny loharano misokatra izany, izay tena zava-dehibe ho an’ireo mpandraharaha hafa.
Ireo tetika nentina nialàna ny Great Firewall Shinoa izay nampiantranoan’i GitHub dia nantsoin’ireo mpikaroka avy ao amin’ny Tetikasa momba ny Fitaovana Malalaky ny Aterineto  sy ireo tranonkala maro izay nanaraka ny tetika amin’ny famoronana tranonkala fitaratra ary koa nanome ny votoatin’izy ireo ho an’ny mpamaky ao amin’ny kaontinanta Sinoa, hoe “fahafahana mirazotra”.
Navilin’ny Great Cannon shinoa ny fifamoivoizana goavana ho any amin’ny https://github.com/greatfire, ny pejy fandraisan’ny Great Fire , tetikasa iray natokana hialàna ny sivana ataon’ny Great Firewall amin’ny fampiantranoana ny tranonkala fitaratr’ireo votoaty voarara, anisan’izany ny New York Times, China Digital Times, Boxun, Free Weibo Project sy ny maro hafa koa. Inoana marimarina fa ny antony nanaovana ilay fanafihana dia mba hanerena ny GitHub hanala ireo pejy ireo.
Taty aoriana, maromaro ny tatitra ara-teknika nanazava  fa avy amina fitaovana iray karazan’ny “sendra-mba-teo” ilay fanafihana izay mipaingotra ireo fangatahana tranonkala avy amin’ny toeran-kafa maneran-tany mba halefa ho hadihadiana any amin’ny Baidu, milim-pikarohana lehibe indrindra ao Shina.
Rehefa tafiditra ao Shina ary ireo fangatahana dia asisik’ilay fitaovana ao amin’ny fitetin’ny solosain’ireo mpampiasa azy ny “java script” iray mba hanafika ny GitHub. Sarotra ho an’ny orinasa ny nanakana ireo fangatahana mpisompatra satria avy aminà loharanom-baovao maro sy goavana ny fanafihana, izay lehibe indrindra teo amin’ny tantaran’i GitHub.
Baidu, izay voasoratra ao anatin’ny lisitry ny tsenm-pifanakalozana ao Etazonia, dia nandà  ny fandraisany anjara tamin’ilay fanafihana, ka mamela ny olona hanontany tena momba izay mety ho andraikitry ny sivana shinoa tamin’iny fanafihana iny.
Ny Great Cannon : Fanafihana an-tserasera eo amin’ny ambaratogam-panjakana
Nampitahain’ny Netizen Lab ny antsipirihany ara-teknika an’ny Great Firewall sy ny Great Cannon, ka ny hevitra nosintoniny tamin’izany dia ny hoe, ny Governemanta Shinoa no mitantana ny Great Cannon. Hitan’ilay Laboratoara nandritra ny fitiliana fa:
1. Toerana iray ihany no misy ny Great Firewall sy ny Great Cannon.
2. Fantsona –an'ila TTL iray karazana ihany ny an’ny Great Firewall sy ny Great Cannon, manambara izany fa ifampizaràn-dry zareo ny “code” fiaingàna sasantsasany.
3. Mifameno amin’ny Great Firewall, ny namolavolàna ny Great Cannon dia ahafahany manivana ireo fifamoivoizana izay tsy mbola voasivanin'ny Great Firewall. Ny andraikiny dia ny mampiditra fifamoivoizana mankany amin'ny lasibatra iray manokana, fa tsy manao sivana ny fifamoivoizana.
4. Great Fire no kendren’ny Great Cannon, izay lazain’ireo manampahefana Shinoa ho “fikambanana vahiny manohitra ny Shinoa”.
Nanamafy koa ny tatitra manaraka izany, fa toa nitaky ny fankatoavan’ny manampahefana ambony teo anivon’ny governemanta Shinoa ny fanombohan’ny fampandehanana ny Great Cannon:
Fiovana tena goavana teo amin’ny paikady ary tena nahitam-bokatra azo tsapain-tanana tokoa ny fampiasana ny Great Cannon. Azo ampoizina fa ity fanafihana ity, sy izay mety ho fiantraikany ara-politika, no tokony tsy maintsy nilàna fankatoavana avy amin’ireo manampahefana ambony eo anivon’ny governemanta Shinoa. Mety ho an’isan’ireto manampahefana ireto ny Biraom-panjakana momba ny Filazam-baovao amin’ny Aterineto (SIIO), izay miandraikitra ny Sivana eo amin’ny Aterineto. Azo heverina ihany koa ny fandraisan’anjaran’ny Rantsamangaika ambony misahana ny Fandrindràna ny Fandriampahalemana an-tserasera ao Shina, ny Vondrona CILG – lohalaharana amin'ny Fandriampahalemana an-tserasera sy ny Fidirana amin'ny Niomerika (CILG) – tao anatin'izany. Xi Jinping no filohan’i CILG ary ireo Zokiolona mpitari-tolona avy tamin’ny Governemanta no mpikambana ao anatiny; ny Biraon’ny Fitantanan-draharahany dia mitoetra ao anatin’ny SIIO ihany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/05/03/69174/
 rafitra QUANTUM an'ny NSA: http://www.wired.com/2014/03/quantum/
 nikatso tanteraka nandritry ny fotoana fohy ilay sehatra ny volana janoary 2013: https://en.greatfire.org/blog/2013/jan/github-blocked-china-how-it-happened-how-get-around-it-and-where-it-will-take-us
 Tetikasa momba ny Fitaovana Malalaky ny Aterineto: https://openitp.org/openitp/about-the-open-internet-tools-project.html